Home » အသားပေး » The Next-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Sony က CineAlta!
The Next-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Sony က CineAlta!
1999, ပထမဦးဆုံးခုနှစ်တွင် CineAlta (HDW-F900) အကြားမိတ်ဖက်များမှစက်မှုလုပ်ငန်းမှမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Sony က နှင့် Panavision ။ ဤသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းအစဉ်ပထမဦးဆုံး 24p ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာနောက်ကျောထို့နောက်အောင်ကြီးတွေဘတ်ဂျက်ရုပ်ရှင်ထဲတွင် 100% ဒီဂျစ်တယ်ပစ်ခတ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဖန်တီးခြင်းအတွက်အပေါငျးတို့သစည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ပထမဦးဆုံး RGB အသံဖမ်းစနစ်ကမှအ CineAlta လိုင်းအများအပြားမျိုးဆက်အပြောင်းအလဲများပြီးနောက် (HDC-F950 နှင့် SRW-1) နှင့်စူပါ 35mm ၏စံနမူနာ 35M 20K အာရုံခံကိရိယာမှပုံရိပ်အာရုံခံကိရိယာ (F8) F65. Sony က ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအဓိကကတော့ CineAlta ဖို့လာမယ့်နည်းပညာကိုအဆင့်မြှင့်တင်ကြေညာခဲ့သည်!
သီးသန့်ဒီဒစ်ဂျစ်တယ် Motion Picture ကင်မရာများအတွက်ဒီဇိုင်းအပြည့်အဝ Frame က 36x24mm အာရုံခံကိရိယာ
aspect ratio-Agnostic - အပြည့်အဝ Frame ကအပါအဝင် Super35 4K 4-စွမ်းဆောင်ရည် 4:3Anamorphic နှင့် 4K အလင်းဆုံ 3-စွမ်းဆောင်ရည် 17: 9
ခြွင်းချက်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးအဖွင့်နယူး image sensor ကို
အတူတည်ထောင်ခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုထိန်းသိမ်းထား Sony က'' s ကို 16bit RAW / X-OCN နှင့် XAVC
CineAlta ကင်မရာများများအတွက်လက်ရှိနှင့်လာမည့်ဟာ့ဒ်ဝဲဆက်စပ်ပစ္စည်း (DVF-EL200 အပြည့်အဝနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ HD OLED Viewfinder, AXS-R7 အသံဖမ်း, AXS-CR1 နှင့် AR1 ကဒ်စာဖတ်သူကို, AXS နှင့် sxs မှတ်ဥာဏ်ကတ်များ) ။
ကနေမျှော်လင့်ထား Sony က 36 Anamorphic နှင့် 24K အလင်းဆုံ 35-စွမ်းဆောင်ရည် 4: ကြောင်းသစ်ကို 4x4mm အပြည့်အဝသည် frame sensor ကို Super3 4K 3-စွမ်းဆောင်ရည် 17 ဖြစ်ပါတယ်9ဖမ်းယူကြီးမားတဲ့ lugging များ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမရှိဘဲပိုမိုကျယ်ပြန်လတ္တီပုံရိပ်အာကာသဘို့ (ထို 65mm format ကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများ) ပေးလိမ့်မယ် မှန်ဘီလူးပေမယ့်လုပ်ငန်းအသွားအလာထောက်ခံမှုများအတွက်တည်ဆဲအခြေခံအဆောက်အအုံရှိခြင်း၏ဆုကြေးငွေအတူ။ အမြဲသကဲ့သို့, CineAlta လိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းစိတ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် (ကင်မရာ) ကိုနည်းပညာပိုင်း core ကိုမှအဆင့်မြှင့်တင်နှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးအဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုပ်ရှင်-အောင်အသိုင်းအဝုိင်းအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ကနေပိုပြီးကြေညာချက်များရှာဖွေပါ Sony က အစောပိုင်း 2018 အားဖြင့်သင်တို့ကိုအနီးအပါးတဲ့ professional မှလာမယ့်သစ်ကို CineAlta လိုင်းများလွှတ်ပေးရေးအပေါ်!
မဿဲပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှစ်ခုလုံးအတွက်နှစ်ဆယ်နှစ်ကျော်များအတွက်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ သူကဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဒေသများရှိအထူးပြု, ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာနှင့်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှု။ မဿဲဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်လွန်ထုတ်လုပ်မှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်ရုံပေါင်းစည်းမှုအတွက်ကျယ်ပြန့်အသိပညာရှိပါတယ်။ မစ္စတာ Harchick တက်ကြွစွာ client ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အစွန်းဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်စမတ်အသံဖိုင်အမြင်အာရုံနည်းပညာများဖြတ်တောက်, အနုပညာထုတ်လွှင့်၏ပြည်နယ်သုတေသီနှင့်သင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုအပ်ချက်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Metaliquid AI အဗီဒီယိုအားသုံးသပ်ခြင်း Reality ပြုလုပ်ခြင်းသည် - ဇူလိုင်လ 10, 2018
Danvers, MA အတွက် 54th SBE အမျိုးသားအစည်းအဝေးအောက်တိုဘာ 2-3 - ဇူလိုင်လ 9, 2018
ကုန်ပစ္စည်း Spotlight ကို: Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K - ဇူလိုင်လ 6, 2018
ယခင်: Cinegy Daniel2 GPU ကို codec ပြည်သူ့ Beta ကိုဝင်ရောက်လာ
နောက်တစ်ခု: FuseFX "ဒါဟာ Fall ကြစို့" ယောဟနျ Ridley ရဲ့ "အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှု" ဟု VFX ပေးနဲ့
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "! The Next-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Sony က CineAlta" ။ http://www.broadcastbeat.com/the-next-generation-sony-cinealta/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။